Kuqhakanjiswa ezokuxhumana koMasipala – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Kuqhakanjiswa ezokuxhumana koMasipala
UMnu uLennox Mabaso (Isithombe: nguBanele Bhengu/Ingabadi Media Images)
OMASIPALA baKwaZulu-Natal basethubeni lokuba benziwe ngcono kwezokuxhumana ukuze bakwazi ukuhambisa ulwazi olufanele emiphakathini abayakhele mayelana nezinhlelo noma nezingqinamba abasuke bebhekene nazo ngaleso sikhathi.
Lokhu kugqame esithangamini sabasebenzi boMasipala basesiFundazweni abakwezokuxhumana, esihlelwe yinhlangano ebhekele ukusebenza koHulumeni Bezindawo okuyiSouth African Local Government Association (Salga), iHhovisi likaNdunankulu noPhiko olubhekele ezokuxhumana kuHulumeni iGovernment Communication and Information System (GCIS) eMusgrave, eThekwini ngoLwesibili. OPhethe ezokuXhumana ehhovisi likaNgqongqoshe Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal, uMnu uLennox Mabaso uthe kubalulekile ukuthi abezokuxhumana kube yibo ababamba iqhaza lokwazisa umphakathi mayelana nezinhlelo eziqhubeka koMasipala ababasebenzelayo.
“Lesi sithangami esokucija abasebenzi bethu abakwezokuxhumana koMasipala ukuba babe nolwazi olunzulu mayelana nokuthi yini okufanele bayenze ukuze bagcine umphakathi ukuqonda kahle ukusebenza kwalowo Masipala abawakhele. Lokhu kungasiza nasekutheni umphakathi wazi uma kukhona izingqinamba ezikhona noma kukhona okuhle okwenziwa uMasipala owakhele. Ngaphandle kwalokho okunye esikubhekayo ukuthi ngabe oMasipala bethu basenza okufanele yini ukuxhumana nemiphakathi ngezinhlelo zabo,” kusho uMabaso. Ukusho lokhu nje, kubenezingqinamba eziningi koMasipala abehlukene KwaZulu-Natal, ikakhulukazi ngonyaka wezi-2015 ngenxa yemibhikisho yabantu abebesuke bekhala ngezidingo besola imikhandlu abayakhele ukuthi ayibanakile futhi ayibazisi ngezidingo zentuthuko ababethenjiswe zona. UMabaso uthe okunye okubalulekile ukuthi abakwezokuxhumana kufanele babeneqhaza ekwelulekeni abaholi babo bemikhandlu njengeziMeya namakhansela ngokubaluleka kokungena ezinkundleni zokuxhumana.
Uqhube wathi lokhu kungasiza ekutheni imiphakathi esebenzisa izinkundla ezifana noFacebook noTwitter babenolwazi lwasnsukuzonke ngokuthi abaholi benzani. “Lezi zinkundla akufanele abahlonishwa enibasebenzelayo basebenzise lezi zinkundla ukuveza impilo yabo yangasese ngoba lokhu kungabaqhatha nomphakathi. Ukwenza isibonelo akufanele sibone iMeya noma uSomlomo esesebenzisa lezi zinkundla efaka izithombe zakhe esemcimbini yobumnandi noma afake ukuthi unezimoto ezingaki zikanokusho. Lokho akufuneki neze kodwa lezi zinkundla kufanele kube ezokuthi uma abahlonishwa beqhuba imisebenzi babhale ukuthi namhlanje bayophendula isoyi kuphi noma bazolungisas isimo somphakathi wakuphi ukuze abantu bahlale bazi ngokusebenza kwabo,” kusho uMabaso.
Uphinde wathi kumanje babheke esigabeni lapho kuzophuma khona imibiko eyahlukene yonyaka yokusebenza komasipala yezinhlelo zentuthuko. Yiyo le mibiko ayichaze ngokuthi kubalulekile ukuba umphakathi ubenolwazi ngayo ukuze ukuqonde ukusebenza komkhandlu ukuthi sekuhambe kwafikaphi noma kubheke kuphi. Uthe yingakho bebenalolu hlobo lwesithangami ngoba abakwezokuxhumana babalulekile ekusebenzeni komasipala. Lesi sithangami akusona esokuqala ngoba sikhona esinye ebesise-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre ebesihlelwe ezingeni likazwelonke. Nakuso kwagcizelelwa ukusebenza ngokuzikhandla kwabakwezokuxhumana ikakhulukazi ekwaziseni umphakathi ngokwenziwa umasipala.
Ngaphandle kwalokho okunye okubuye kwabukwa kube indaba yolimi olusetshenziswa omasipala emiphakathini uma bexhumana nabo. Esikhathini esiningi kubanezikhalo zokuthi omasipala bayabakhohlwa abantu abakhuuma izilimu zoMdabu zakuleli bese bedlulisa imiyalezo ebalulekile ebhalwa ngesiLungu. Omunye umasipala okewasolwa ngalokhu kube owaseThekwini obekukhalwa ngokuthi imibiko eminingi ebalulekile ethinta umphakathi kubonakala sengathi ibhekele kakhulu labo abakhuluma isiNgisi ekubeni beyidlanzana uma kuqhathaniswa nezakhamizi ezikhuluma isiZulu.
UMabaso uthe lokhu kubalulekile ukuba abasebenzi bezokuxhumana bakuqaphele ngoba yikho kwesinye isikhathi okugcina sekwenza umyalezo ungafinyeleli kubantu abahlala emalokishini nasezindaweni zasemakhaya ngoba ulimi ababikelwa ngalo akulona abalukhulumayo noma akusilona olwebele.